နိုင်းမိကျောင်းများကို မဒဂါစကာ၊ ဆာဟာရတပိုင်း အာဖရိကနှင့် နိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တို့၌ တွေ့ရှိရသည်။ ယခင်က ဂျော်ဒန်နှင့် အစ္စရေးတွင်လည်း တွေ့ရသည်။မြစ်ချောင်းများ၊ မြစ်ဝများ၊ ရေချိုစိမ့်တောများနှင့် လမုတောရှိ ဗွက်တောများစသော အရပ်ဒေသအမျိုးမျိုး၌ နေထိုင်ကျက်စားသည်။.
↑ ၂.၀ ၂.၁ "Crocodylus niloticus" (2019). IUCN Red List of Threatened Species 2019. IUCN.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ Nile Crocodile။ National Geographic (January 14, 2016)။ January 14, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ Nile crocodile - Crocodylus niloticus။ arkive.org (2012)။ 23 January 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ Cott, H.B. (2010). "Scientific results of an inquiry into the ecology and economic status of the Nile crocodile (Crocodilus niloticus) in Uganda and Northern Rhodesia". The Transactions of the Zoological Society of London 29 (4): 211–356. doi:10.1111/j.1096-3642.1961.tb00220.x.
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ Guggisberg, C.A.W. (1972)။ Crocodiles: Their Natural History, Folklore, and Conservation။ p. 195။ ISBN 978-0-7153-5272-4။
↑ "Molecular evidence for species level divergence in African Nile crocodiles Crocodylus niloticus (Laurenti, 1786)" (2003). Comptes Rendus Palevol2(8): 703. doi:10.1016/j.crpv.2003.07.002.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်းမိကျောင်း&oldid=723791" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။